Mobile Archives | Designer | Code Nemesis
Telecom को साउन १ गतेदेखि ९० दिनसम्म आकर्षक समर अफर
Thursday, 16 July 2020 by Spn Sapan
समर अफर अन्तर्गतको सेवा मिति २०७७ साउन १ गते देखि ९० दिनसम्म उपलब्ध हुनेछ । पहिले देखि नै उपलब्ध केही प्याक यथावत राखिएको छ भने केही प्याकलाई परिमार्जन गरी थप ग्राहकमैत्री बनाइएको छ ।
कम्पनीले युट्युब स्ट्रिमिङ डाटा प्याक अन्तर्गत रु. २५ मा एक दिनका लागि १ जीबी डाटा उपलब्ध गराएको छ । सोसल मिडिया प्याक अन्तर्गत रु. १५ मा एक दिनका लागि २०० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । सोसल मिडिया प्याकमार्फत फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप चलाउन सकिने छ ।
रातिको समयमा प्रदान गरिएको भ्वाइस प्याक यसअघि राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र उपलब्ध भएकोमा अब एक घण्टा बढाएर बिहान ७ बजेसम्म उपलब्ध गराइने छ । नाइट टाइम भ्वाइस प्याक अन्तर्गत रु. १० मा उपलब्ध ६० मिनेटको भ्वाइस प्याक यथावत उपलब्ध छ भने रु. १५ मा ३ रातका लागि २०० मिनेट र रु. ३० मा ७ रातका लागि ३५० मिनेट भ्वाइस प्याक उपलब्ध हुनेछ । यी प्याक राती १० बजे देखि बिहान ७ बजे सम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत ३ दिन, ७ दिन र २८ दिनका लागि लिन सकिने प्याकमा केही परिमार्जन गरिएको छ । यसमा रु. ६० मा ३ दिनका लागि ४०० एमबी, रु. १०० मा ७ दिनका लागि ८०० एमबी, रु. २८० मा २८ दिनका लागि २.५ जीबी, रु. ५०० मा २८ दिनका लागि ७ जीबी र रु ८०० मा २८ दिनकै लागि १६ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ ।
डे डाटा प्याक अन्तर्गत अब रु. १० मा ८० एमबी र रु. १८ मा २५० एमबी डाटा प्याक प्राप्त गर्न सकिने छ । विहान ६ देखि साँझ ६ बजे सम्म प्रयोग गर्न सकिने सो प्याकको समयावधि २४ घण्टा हुनेछ । वान नाइट अनलिमिटेड डाटा अन्तर्गत राती ११ देखि विहान ६ बजे सम्म चलाउन सकिने प्याकेज रु. २० मा उपलब्ध हुनेछ ।
डे भ्वाइस प्याक अन्तर्गत रु. १२ मा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म १२० मिनेट कल गर्न सकिने अर्को प्याक पनि उपलब्ध हुनेछ । यो अफरमा प्रदान गरिएको १२० मिनेट एकैदिन प्रयोग भएन भने भोलिपल्ट २४ घण्टासम्म सोही अवधिमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
रु. १५ मा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म लागु हुने अनलिमिटेड कल अफरलाई निरन्तरता दिइएको छ । लार्ज डाटा प्याक अन्तर्गत अब रु. १,६०० मा ६० दिनका लागि ३० जीबी प्याक र रु. ३००० मा १२० दिनका लागि ६० जीबी प्याक उपलब्ध हुनेछ ।
फोरजी÷एलटीई अफर अन्तर्गत रु. १५ मा १ दिनका लागि जम्मा १०० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । यसबाट ५० एमबी सबै नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने छ र थप बोनसको रुपमा फोरजी नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिने ५० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ ।
साथै पहिले देखि नै स्प्रिङ अफरका रुपमा उपलब्ध अन्य प्याकहरु यथावत रहेका छन् । विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले ८ज्ञद्धज्ञछ३ डायल गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक कम्पनीको एप प्रयोग गर्दा १०० एमबी डाटा फ्रि उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।
Nepal Telecom ले हरेक वडामा वाईफाई पुर्याउने, ल्याण्डलाइन फोनको पनि सुविधा
Wednesday, 15 July 2020 by Spn Sapan
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रममै समेटेर वाईफाई सुविधा विस्तार गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
वडामा रहेका टेलिकमको बीटीएस टावरमार्फत विशेष ‘डिभाइस’को प्रयोग गरेर वाईफाई सुविधा उपलब्ध गराउने टेलिकमको योजना छ । टेलिकमलाई उपलब्ध आठ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर वाईफाई उपलब्ध गराइने कम्पनीका इन्जिनियर अमृत नेपालले जानकारी दिए । कम्पनीले वाईफाईसँगै फिक्स्ड टेलिफोन सेवा पनि समाहित गरेर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्तालाई फिक्स्ड टेलिफोन उत्तिकै आवश्यक र महìवपूर्ण हुने भएकाले यससँगै त्यो सुविधा पनि हुनेछ, उनले भने ।
तत्काल संस्थागत प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराइने यो सुविधा व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई टेलिकमले उपलब्ध नगराइने प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । सर्वसाधारणमा व्यापक रूपमा गयौँ भने ब्यान्डविथ सबै यसमै प्रयोग हुन्छ, त्यसो हुँदा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड महँगो हुन्छ, उनले भने – धेरै बाँडेर रिसोर्स सकियो भने फेरि रिसोर्स थप्नुपर्छ, जुन निकै सीमित छ ।
व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताको हकमा मोबाइल ब्रोड ब्यान्डको पहुँच र गुणस्तरलाई पनि बढी जोड दिइने उनले स्पष्ट पारे । टेलिकमले संस्थागत प्रयोगकर्र्तालाई उपलब्ध गराउन लागेको वाईफाई सुविधाका लागि प्रयोग हुने डिभाइस तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनेछ । यद्यपि सकेसम्म सस्तोमै सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले उक्त डिभाइसमा टेलिफोन परीक्षणको काम भइरहेको छ । आठ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग हुने भएकाले टावरबाट लामो दूरीमा पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै हरेक वडामा यो सुविधा पुर्याउने गरी योजना तयार गरेको जनाएको छ ।
Ncell को नयाँ अफर, प्रति मिनेट ८ पैसामै कुरा गर्न सकिने
आफ्नो नयाँ थिम ‘प्लस’ अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकलाई लक्षित गर्दै एनसेलले सार्वजनिक गरेको यो आकर्षक योजनाअन्तर्गत अब कम्पनीका ग्राहकले आवश्यकताअनुसार सात दिन, १५ दिन र ३० दिन अवधिका तीन वटा प्याकेज रोजेर लिन सक्नेछन् ।
७ दिन समयसीमा रहेको सात सय मिनेट अन नेट टक टाइमका लागि कर सहित मात्र केवल ९५.७७ रुपैयाँ मात्र शूल्क लाग्नेछ । यो प्याकमा प्रति दिन सात दिनसम्म १०० मिनेट टक टाइम प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै १५ दिनको प्याकमा कर सहित मात्र १९१.५४ रुपैयाँमा १८ सय ७५ मिनेट अन नेट टक टाइम पाउन सकिनेछ । यसमा प्रत्येक दिन १२५ मिनेटको टक टाइम प्राप्त हुनेछ ।
भ्वाइस सेवाको अझ धेरै आवश्यकता हुने प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनको आकर्षक भ्वाइस प्याक रहेको छ । यो प्याक अन्तर्गत कम्पनीका ग्राहकले कर सहित मात्र ३८१ं.७९ रुपैयाँमा ४,५०० सय मिनेट अन नेट टक टाइम प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसमा हरेक दिन १५० मिनेट टक टाइम ३० दिनसम्म प्राप्त हुने जनाइएको छ । यो प्याक सुचारु गर्ने प्रयोगकर्तालाई प्रति मिनेट कुराकानी गर्न आठ पैसा मात्र पर्नेछ ।
*१७११८*७# डायल गरी प्राप्त निर्देशनअनुसार यी प्याक सुचारु गर्न सकिनेछ । साथै एसएमएसबाट समेत इण्डलेस कुराकानी प्लस प्याक रोज्न सकिनेछ । त्यसका लागि उदाहरणको रुपमा सात दिनको प्याक लिन चाहेको हो भने १०० टाइप गरी १७११८ मा एसएमएस पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै १५ दिनको प्याक लिन १२५ र ३० दिनको प्याकको लागि १५० टाइप गरी सोही नम्बरमा एसएमएस पठाउनुपर्नेछ ।
एनसेलका प्रमुख व्यापारिक अधिकृत प्रदीप श्रीवास्तवले सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको प्रतिवद्धता अनुरुप भ्वाइस अफर ल्याइएको बताए । आफ्नो नयाँ थिम ‘प्लस’ अन्तर्गत नै कम्पनीले आफ्ना फोरजी ग्राहकहरुको लागि आकर्षक ‘ननस्टप युट्युव प्लस’ अफर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
‘वायरफ्री प्लस वाईफाई’ सेवाको बुकिङ सुरु गरी सकेको कम्पनीले ‘प्लस’ थिमले नवीन र विशेष सेवाहरुको साथ ग्राहकलाई हरेक पल जहाँ भए पनि सेवामा पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।